Abtidoon: Miyaa la I Wada Ogg Yahay Ma Malagaybaa ku Galay Maraykan Maxaa Igga Jira – Rasaasa News
Nin Dakana qaba oo la dayday oo dambiile ah oon la daynayn dadkuna ogg yahay, daaqsin doontee in laguu digay dawga qabatoo is daldhicisee dadka gaadhsii.
Warar aan ka helayno kooxda Jwxo-shiilada, ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ninka loogu yeedho Abtidoon oo dadka intiisa badani u yaqaanaa Maadeey, uu bilaabay dhaqdhaqaaqii u horeeyey ee kooxda Jwxo-shiil tan iyo bishii February 2009. Kolkaas oo uu isag laftigiisa iyo Qaaxo ay safar kaga soo laabteen dhulka Maraykanak, socdaalkaas oo ahaa socdaalkii laga hagayey dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal.
Maadey oo ah dadkii ugu horeyey ee looga faa,iideeyey vissa ay Jabhada ONLF ugu dirto Afrika isaga iyo Eebe ha u naxariistee Professor Aboole, ka dibna wuu diiday in uu ku laabto gudaha, ka dib kolkii laga hely cudurka Cagaarshowga [hepititis] sanadkii 1993 dhamaadkiisii. Maadey waxaa uu isbitaal u galay cudurka [Heptitis] isga oo aan sharci lahayn lanna dhiibin oo uu joogo guriga Eebe ha u naxariistee Mujaahid Dr. Dolal, waxaana loogu yeedhay Dhakhaatiirta degdega ah isaga oo sheeganaya magaca Dr. Dolal, waxaa la dhigay isbitaalka Islighton, halkaas oo uu ku jiray muddo bil ah. Dhakhaatiirta ayaa ka shakiyey in uusan ahayn Dr. Dolal waayo Dolal ma qabin cudurkan, wayna qaadan waayeen takhtaradu sida uu xanuunkani ugu soo booday.
Dolal ayaa sii qqaday Maadey, waxaana Isbitaalkii yimid Takhtarkii qoyska Dolal wuxuuna ugu yimid dolal oo nin kale kor fadhiya, kolkaas ayuu dolal runta u sheegay waxayna noqotay in magaciisa lagu daweeyo. Waxaa kale oo kaaga sii daran waxaa lagu shubay oo lagu badbaadiyey dhiiga Doolaal, kolkii uu isbitaalka ka soo baxayna waxaa baantay Qoyska Dolal.
Hadab, Maadeey waxaa uu ahaa asaxaabta uu Dolal sida gaarka ah u soo gacan qabtay, waxaana uu ku soo koray baa la odhan karaa xaafada Dolal, waxaana uu ahaa muddo dheer saaxiibo siyaasadeed iyo waliba kuwa fadhiga. Waxaa bulsha badankeedu ay la socdaan in Maadeey uu lee yahay xanuun xaga maskaxda ah kaas oo mar marka qaarkood uusan bilo guriga ka soo bixin. Waxaa kale oo uu lee yahay cudurka BUUFISKA, kaas oo inta badan ku dira saaxiibadiis, waayo sida aad og tihiin buufisku waa cudur shaki ah oo aad ka dhuuman ruuxii ku yaqaan oo dhan, hadana sida ay warar hoose sheegayaan waxaa uu u dhaartay beesha Jwxo-shiil oo uu ka tirsan yahay.
Maadeey ama Abtidoon kolba sida aad u taqaan, waxaa uu ku soo dhex koray reer Abtigii oo wax alaale wixii aad weydiiso wuxuu moodaa reerka Mareexaan [ Aragti Somali ah baa qabta, Doqonku kolka uu yar yahayna waxaa uu ka tirsan yahay reer Abtigii, kolka uu guursadana waxaa uu ka tirsanaadaa Afadiisu reerka ay tahay].
Maadey waxaa loo haystaa in uu ka mid yahay raga loo haysto in ay dileen Dr. Maxamed Siraad Dolal, oo saaxiibkii ahaa, walina arintaas ma uusan beenin, waxaana loo dabo socdaa laga abaal mariyo dambigaas uu galay ee ah ka qayb qaadashada dilka saaxiibkiis.
Markhaati uma baahna in Maadeey uu ahaa dadka afka ka cadaystay si caalami ah isaga oo waraysi siiyey Ideecada VOA, bishii January 2009, isga oo u dhaaranaya in la dili doono Dr. dolal, Waxaana ka mid ahaa erayadiisii “Dolal halkaas in yar ha sii joogo waxa ku dhaca“. Maalmo kama soo wareegin markii si qarsoodi aha loo dilay Dr. Dolal January 17, 2009.
Maadeey iyo kuwa kale ee la midka ah, waxaa dhab ah in kol ay noqotaba sidii loo dilay Dr. Dolal si la mid ah in ay u dhiman, waxaanase garanaynin kolka ay noqon doonto.
Dr. Dolal waxaa uu joogay oo uu ku dhintay dhulkii iyo dadkii uu u halgamayey, hadii uu nool yahay iyo hadii uu dhintaybana magac buu lahaa.
Waxaanse isweydiinayaa Maadeey iyo muquunada uu Jwxo-shiil ku adeegto, ma waxay moodayaan in la xoraynayo dalalka reer galbeedka, dhulka Ogadeeniya ruuxii doonaya in uu wax u qabto, dhibaatada ayuu dadka la qaybsadaa. Laakiin ruuxii doonaya in uu kolba dal ka mid aha dalalka reer galbeedka iska dhiibo oo uu lacag ka uruursado, way ogg yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyaga ayaana ka goyn magac xumada ay kula dhex wareegayaan bulshada Somalida Ogadeeniya.